CIN Khabar विवाह मेरो प्राथमिक्तामा परेन तर आमाबुवाको चाहाना पूरा नगरेकोमा मन कोतरिन्छः मन्त्री पोखरेल
Lil Prakash Chand मंगलबार, फागुन ७, २०७५, ०९:०४:००
नेपाली राजनीतिमा लागेका अविवाहित नेताहरुको बेलाबखतमा चर्चा हुने गर्छ 'उनीहरुले समय नपाएर विवाह गरेनन् कि योग्य वर,बधु नपाएका कारण अविवाहित रहे। 'पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला, नेताहरु पम्फा भुसाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विन्दा पाण्डेलगायत अविवाहित नेताहरुको सूची बनाउने हो भने लामै बन्न सक्छ । राजनीतिमा लाग्दैगर्दा छुटेको एउटा सामाजिक पाटो (विवाह) बारे हामीले नेकपाका नेता तथा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ ।
विवाहका लागि आएको उपयुक्त उमेरलाई तपाईले उपयोग गर्न सक्नु भएन कि के भयो ?
धेरै साथीहरुले मिडियाबाट 'विवाह किन गरिनस्' भनेर सोध्छन् । विवाह भन्ने कुराचाहिँ प्राकृतिक कुरा हो । म त धेरै साथीभाइको विवाह गराउँदै हिडेको मान्छे हुँ । म एउटा ठूलो दुर्घटनामा परेँ । त्यसबाट निस्कन मलाई झण्डै ६ महिनाजति लाग्यो ।
मलाई यस्तो ढङ्गले साथीभाइले सेवा गर्नुभयो भनु न । ८६ दिन त मलाई अरुले दिसापिसाव गराएर उठाउनु भएको हो । वास्तवमा एउटा सामूहिक घर छ । अनि आमाहरु हुनुहुन्छ, त्यसभित्र बच्चाहरुको हेरविचार गर्नुहुन्छ ।
मैले एकदमै राम्रो पारिवारिक स्नेह प्राप्त गरेको छु । सेवा प्राप्त गरेको छु । थुप्रै खालका समस्या हुँदाहुँदै, शारीरिक समस्या भए पनि अपनत्वपूर्ण वातावरण प्राप्त गरेको छु ।
त्यो ८६ दिन अस्पतालमा बस्नुपर्ने कारण के थियो, भन्न हुन्छ ?
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरिसकेपछि लाहानमा एउटा कार्यक्रम गर्न लागेका थियौँ । प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई त्यहाँबाट लैजानुपर्ने भयो अनि जनकपुरको एउटा टिकट मिलायौँ हामीले ।
'प्राथमिकता दिइएको बेलामा कतिपय कुराहरु मिलेनन् । विवाह मूल प्राथमिकता हुँदा एक खालको हुँदो रहेछ । सामाजिक परिवर्तनलाई मूल प्राथमिकता र त्यसको अधिनस्त राखियो । मैले सबैलाई के भन्न चाहान्छु भने 'समयमा विवाह गर्नुपर्छ र प्रेममा आधारित विवाह गर्नुपर्छ । धेरै बच्चाहरु जन्माउनु हुँदैन ।'
अनि भोलिपल्ट बिहान मकालुको बसबाट म लहानतिर जाने टिकट थियाे । प्राध्यापक कृष्ण खनाललाई जहाजको टिकट लिइयो । त्यो टिकट म हाम्रो कमरेड लीलामणि पोखरेलको घरमा पुर्याउन भनेर बेलुका करिब ८ बजेतिर निस्केँ ।
त्यही बेला एउटा माइक्रो बसले मलाई हान्यो । एक जना बद्री चौलागाई भन्ने साथीले मलाई बचाउनुभयो । हस्पिटलमा होसमा आउँदा म कराइराखेको थिएँ ।
दुर्घटनापछिको उपचार प्रक्रिया कसरी अघि बढाउनुभयो ?
मेरो २६ ठाउँमा चोटपटक लागेको, भाँच्चेको थियो । एक प्रकारले म पुनर्जीवित मान्छे हुँ । अनि ८६ दिन म अस्पतालमा बस्नुपर्नेभयो । खुट्टामा जहाँ भाँच्चिएको थियो, त्यहाँ हड्डीको टुक्रा देखियो ।
७२ दिनबाट निस्कनुपर्यो भनेर निस्केको एकदम दुख्यो । केएमसीपछि मैले डा बाबुकाजी श्रेष्ठसँग उपचार गराइरहेको थिएँ । उहाँले मलाई अपरेशन थियटरमा लगेर हेर्दाखेरी शिशाको टुक्रा रहेछ । त्यसले पनि असर गरेको रहेछ ।
पिसाव गर्ने साइडपट्टिको भागमा दुई ठाउँमा भाँच्एिको थियो मेरो । अस्पतालबाट निस्केर बैशाखी लगाएर म ६२/६३ को आन्दोलनमा हिडेँ । आफ्ना पुराना रोगहरुको उपचार गर्दै फेरि फिल्डमा जाने गरेको छु । त्यो बेलाका अधुरा खालका उपचार अहिले पनि गर्नुपरेको छ ।
दुर्घटनापछि राम्रो स्याहार पाएर घरजम गर्ने कुराको मायामोह रहेन वा ठूलो दुर्घटनाबाट पुनर्जीवन पाइसकेपछि बाँकी समय विवाहवारी भन्दा पनि अरु केही योगदान दिन्छु भन्ने ठान्नुभयो ?
विवाह गर्ने एउटा उमेर हुन्छ । मलाई लाग्छ त्यो उमेरमा सबैका बिभिन्न प्रकारका आकांक्षा हुन्छन् । युवाको विशेषता, शिक्षा, रोजगारी र विवाह विश्वभरिका सार्वभौमिक पक्ष हुन् ।
हामी क्रान्तिकारी आन्दोलनमा लागिउँ, परिवर्तनको आन्दोलनमा लागिउँ अनि जतिखेर विवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । त्यो बेला दिइएन । प्राथमिकता दिइएको बेलामा कतिपय कुराहरु मिलेनन् अनि विवाह मूल प्राथमिकता हुँदा एक खालको हुँदो रहेछ ।
बाबाआमाका इच्छा पूरा गर्न नपाएकोमा स्वाभाविक ढङ्गले पीडा हुन्छ । तर मैले सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा काम गरेर नै मेरा बाआमाको सपनाहरु, इच्छाहरुलाई पूरा गरेको छु भनेर आफूलाई चित्त बुझाउँछु ।
सामाजिक परिवर्तनलाई मूल प्राथमिकता र त्यसको अधिनस्त राखियो । मैले सबैलाई के भन्न चाहान्छु भने समयमा विवाह गर्नुपर्छ र प्रेममा आधारित विवाह गर्नुपर्छ । धेरै बच्चाहरु जन्माउनु हुँदैन, राष्ट्रको लागि सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
अहिले तपाई कति वर्षको हुनुभयो ।
म ५८ पुगेँ ।
अव विवाह भन्ने कुरा तपाईको जीवनमा हुँदैन कि फेरि पुनर्विचार हुन सक्छ ?
मैले के भन्न चाहान्छु भने यस्तो खालको प्रश्न म सार्वजनिक महत्वको ठान्दिन । तर पनि मान्छे परिवर्तनशील छ, समाज परिवर्तनशील छ ।
त्यसैले यो ढङ्गले बोल्नु नै उपयुक्त विषयवस्तु होइन । मेरो प्राथमिकतामा परेन, मेरा केही मान्यताहरु छन् । सामाजिक परिवर्तनमा म एक ढङ्गले हिडेको छु । यही कुरा नै म राख्न चाहान्छु ।
अहिले नेकपाका कतिपय नेताहरुले गिरिराजमणिको विवाह गर्दिनुपर्छ भनेर ठाउँठाउँमा कुरा गर्दै हिडेको पनि सुनिन्छ बेलाबखतमा। चिन्ताचासो त तपाई कै पार्टीमा छ नि ?
त्यसरी सोच्ने सबै साथीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । मेरो बा बित्नु भएको एक वर्ष भयो ।अस्ति भर्खर म वार्षिकीमा गएर आएँ । उहाँ रहुन्जेलसम्म कसै न कसैलाई कुरा गराइराख्नुहुन्थ्यो उहाँले ।
तपाईको बुवा बुहारी होस् भन्ने चाहानुहुन्थ्यो ?
त्यो त स्वभाविक ढङ्गले सबै बाआमाको चाहाना हुन्छ । मेरो दिदी, दाजुहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुको पनि त्यस्तो चाहाना हुन्छ ।
बुहारी भित्र्याउने चाहाना पूरा नगरी बुवा बिदा हुनुभयो । तपाईलाई बुवाको अधुरो चाहानाले कतै कोतरीरहेजस्तो लाग्दैन ?
यो विषयवस्तु कस्तो हो भन्दाखेरी, जुन बेलामा म मास्टर्स डिग्री गरिराखेको थिएँ । त्यतिखेर नै मेरो अगाडिपट्टी पविारलाई हेर्ने कि देशलाई,समाजलाई, आफ्नो विचारलाई हेर्ने भन्ने भयो । मेरो फुपू अहिले त हुनुहुन वित्नुभयो ।
उहाँले बोलाएर कुराकानी गर्नुभएको थियो । मेरो आमाको निधन भइसकेपछि । बाले अर्को विवाह गरिसक्नु भएको थिएन, पछि विवाह गर्नुभयो । बोलाएर फुपूले सोध्नु भएको थियो ।
कुनै समय तत्कालीन माओवादी केन्द्र वा त्यसअघिको एकीकृत माओवादी पार्टीमा अविवाहितहरुको पोलिटव्यूरो थियो भनेर पनि चर्चा हुन्थ्यो । सोनाम साथी, प्रकाश जी, नरबहादुर दाई हुनुहुन्थ्यो । भारतको कुन्नि कुन एउटा कम्युनिष्ट पार्टीजस्तै भयो पनि भन्थे ।
मैले के भने भने 'विहे नै गरेँ भने पनि त घरको कुरालाई ध्यान दिन सक्दैन म, आफ्नो आवश्यकताका आधारमा हिड्छु ।' त्यसकारणले यो सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रियामा हिड्दाखेरी आफ्नो छोराको हितका लागि उसले विवाह गरोस् भनेर सबै आमाबाबाहरुले सोच्नुहुन्छ ।
त्यसैगरी मेरो बा र आफन्तले पनि त्यसैगरी सोच्नु भएको हो । त्यो सकारात्मक कुरा पनि हो । आफूले निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि आफ्नो लागि के गर्दा बढी राम्रो हुन्छ भन्ने ढङ्गले सोचिदो रहेछ । एक ढङ्गले एउटा यस्तो समय थियो कि जुन तत्काली माओवादी केन्द्रमा हामीले काम गरिउँ त्यहाँ अविवाहितहरुको पोलिटव्यूरो थियो ।
कति जनाको थियो अविवाहितहरुको पोलिटव्यूरो ?
सोनाम साथी, प्रकाश जी, नरबहादुर दाई हुनुहुन्थ्यो । भारतको कुन्नि कुन एउटा कम्युनिष्ट पार्टीजस्तै भयो पनि भन्थे ।
सोनाम साथीले त पछि विवाह गर्नुभयो नि ?
सबैका आआफ्ना भिन्नभिन्न परिवेशहरु हुन्छन् । बाबाआमाका कतिपय इच्छाहरु पूरा गर्न सकिएन ।
बाबाआमाका इच्छा पूरा गर्न नपाएकोमा पीडा महसुस हुन्छ अहिले ?
स्वाभाविक ढङ्गले हुन्छ तर मैले सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा काम गरेर नै मेरा बाआमाको सपनाहरु, इच्छाहरुलाई पूरा गरेको छु भनेर मैले आफूलाई चित्त बुझाउँछु ।
तपाईले सार्वजनिक महत्वको विषय होइन भन्नु भए पनि बेलामौकाले तपाईको एक्लो जिन्दगीको बारेमा पनि कुराकानी हुने भएर मैले सोध्नुपर्यो, समयको लागि धन्यवाद छ ?
पत्रकार साथीहरुले यो विषय बढी नै उठाउनुहुन्छ । तपाईहरुको प्रश्न आइराख्दाखेरी मलाई निरास बनाउन मन लाग्दैन, मैले त उत्तर दिने न हो ।
पुनश्चः मन्त्री पोखरेलसँग करिब एक वर्षअघि सीआईएनको स्टुडियोमा यो कुराकानी गरिएको थियो । समय र केही सन्दर्भहरु सम्पादन गरी फेरि प्रकाशित गरिएको छ ।
पोखरेलसँगको कुराकानी सुन्न तलको लिङ्कमा जानुहोस्ः
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन ७, २०७५, ०९:०४:००
हेलम्बुका किउल, चनौटे, ग्याल्थुम लगागत क्षेत्रमा मात्र ५५ र तालामाराङ र मेलम्चीमा ५ घर टहरा बाढीले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी उपरीक्षक राजन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । ५ घण्टा